हत्केलाको कुन रेखाले के संकेत गर्छ ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/हत्केलाको कुन रेखाले के संकेत गर्छ ?
हत्केलामा विभिन्न रेखा, चिन्ह वा आकृती बनेका हुन्छन् । जसको सम्बन्ध व्यक्तिको भाग्य, धन र ऐश्वर्यसँग समेत रहने गरेको छ ।यदि कुनै ब्यक्तिको हत्केलामा जहाँ बुध वा शनि पर्वत बनेको हुन्छ त्यहा तराजूको निशान भए यस्ता ब्यक्तिले कहिल्यै धनको अभाव बेहोर्नु पर्दैन । यस्ता ब्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा निकै सफलता र धन कमाउने मान्यता छ । यस अलावा यस्ता ब्यक्तिको समाजमा राम्रो प्रतिष्ठा हुने गर्दछ ।
पानीमा लामो समयसम्म राख्दा किन चारिन्छ छाला ?